Waa maxay Xayeysiinta Dhaladka ah? | Martech Zone
Sida lagu qeexay FTC, xayeysiinta wadanku waa khiyaano haddii ay jirto wax been abuur ah ama xitaa haddii ay jiraan maqnaanshaha macluumaadka taasi waxay u egtahay inay marin habaabiso macaamilka si macquul ah ugu dhaqaaqaya duruufaha. Taasi waa hadal shaqsiyeed, mana hubo inaan doonayo inaan iska difaaco awoodaha dowladda.
Guddiga Ganacsiga Federaalka ayaa qeexaya xayeysiis hooyo maaddaama ay ka kooban tahay wixii la mid ah wararka, maqaallo muuqaal ah, dib u eegis wax soo saar, madadaalo, iyo waxyaabo kale oo ku wareegsan internetka. Xayeysiinta Dhaladka ah ee FTC: Tilmaamaha Ganacsiyada
Sanadkii la soo dhaafay, Lord & Taylor waxay bixiyeen 50 saamileyaal internet ah si loogu dhajiyo sawirrada Instagram iyaga oo xiran isla dharka paisley ee aruurinta cusub. Si kastaba ha noqotee, way ku guuldareysteen inay soo bandhigaan waxay qabteen la siiyey mid kastaa wuxuu saameyn ku yeeshaa dharka, iyo sidoo kale kumanaan doolar, oo lagu beddelayo ansaxintooda. Xadgudub kasta oo loo soo bandhigo la'aantaas wuxuu ku muteysan karaa ciqaab sokeeye oo gaareysa $ 16,000!
In ka badan saddex-meelood meel ka mid ah daabacayaasha warbaahinta dhijitaalka ah ayaan u hoggaansameynin qawaaniinta FTC ee xukuma degellada xayeysiinta u gaarka ah iyo waxyaabaha la kafaala qaaday, sida laga soo xigtay a daraasad toddobaadkan ay soo saartay MediaRadar.
Waa maxay sababta shaacintu u tahay mid Halis ah
Bixinta xayeysiinta wadaniga ah waa sharciga Mareykanka iyo dalal kale oo badan. Laakiin shaacinta xiriirka lala leeyahay astaanta kaliya maahan arrin sharci, waa mid lagu kalsoonaan karo. Qaar badan oo suuqleyda ah ayaa rumeysan in shaac ka qaadista ay saameyn ku yeelan karto sicirka beddelka, laakiin marqaati kama aanan arag tan. Akhristayaasheena waxay nala joogeen toban sano waxayna ku kalsoon yihiin, haddii aan daabaco talo soo jeedin, inaan sidaas ku sameynayo sumcaddayda khadka.
Daahfurnaanta macaamiisha waa mid muhiim ah, oo qaybaha xayeysiintu ma aha inay u soo jeediyaan ama u muujiyaan macaamiisha inay yihiin wax kale oo aan ahayn xayeysiin. Haddii shaacintu ay lagama maarmaan tahay si looga hortago khiyaanada, shaacintu waa inay noqotaa mid cad oo waa inay noqotaa mid caan ah. Aadam Suleymaan, Michelman & Robinson
Weligay khatar gelin maayo sumcadayda. Xaqiiqdii, waxaa la i weydiistaa ku dhowaad maalin kasta inaan daabaco maqaallada isla markaana laygu siiyo lacag-celin gadaal gadaal ah waana diidayaa. Waqtiyada qaarkood, wakaaladuhu waxay leeyihiin kalsooni ay ku codsadaan inaan soo dhigo wax aan shaaca laga qaadin. Dib ayaan u qoraa oo waxaan weydiiyaa sababta ay u aaminsan yihiin in ku tumashada qawaaniinta federaalka ay caadi tahay… wayna baaba'aan oo weligood jawaab kama bixiyaan.
Kobaca Xayeysiinta Dhaladka ah
Saaxiibkiis Chad Pollitt ayaa dhowaan daabacay 2017 Tikniyoolajiyadda Xayeysiinta Dhaladka ah oo waxay ahayd wax layaab leh, oo dhex maraya dhammaan kanaallada iyo tiknoolajiyada ay saamaynta ku yeesheen oo ay taabteen xayeysiinta waddanku.
Sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay daabacday MediaRadar, Hogaamiyaasha iyo casharada ku saabsan xayeysiinta hooyo, korsashada iyo baahida loo qabo xayeysiinta wadanku aad ayey u sarreeyaan celcelis ahaanna 610 xayeysiiyayaal cusub oo adeegsanaya xalalka nuxurka gaarka ah bil kasta.
Warbixinta Isbadalka Xayeysiinta Dhaladka ah ee MediaRadar
Tags: Aadam Suleymaanbixintaftcshaacinta ftcSaameeyayaashaSayid & TaylorMichelman & Robinsonxayeysiis hooyo